I-china Isopropylated Triphenyl Phosphate abakhiqizi nabaphakeli | Inhlanhla
I-Isopropylated Triphenyl Phosphate iyinto yamakhemikhali nefomula yamangqamuzana e-C27H33O4P.
I-IPPP35 iyi-halogen-free phosphate flame retardant plasticizer futhi ngeke ingcolise imvelo kabili. Kulezi zinhlobonhlobo ze-phosphate, i-IPPP35 ingeyohlobo olune-viscosity elinganiselayo nokuqukethwe kwe-phosphorus. I-Isopropylated Triphenyl Phosphate ayinambala futhi isobala, enokungaziphathi kahle okuhle, futhi ingaba i-flame retardant ne-plasticizer. I-Isopropylated Triphenyl Phosphate idlala indima yokulinganisa phakathi kwelangabi elikhuselayo neplastizerizer. Kungenza futhi ukuthi izinto ezicutshungulwayo zingashintshi ngombala nangezakhiwo zomzimba futhi zisetshenziswe kabanzi emikhakheni ehlukahlukene efana ne-PVC, i-fiber resin, injoloba yokwenziwa, uwoyela ocindezelayo njalonjalo.
Ukuhlinzekwa kokubonisana ngentengo ye-isopropylated triphenyl phosphate, iZhangjiagang Fortune Chemical Co, Ltd, phakathi kwalabo abakhiqizi be-isopropylated triphenyl phosphate eChina, balinde wena ukuthi uthenge i-ippp 35 ngobuningi, kronitex 100, triaryl phosphates, reofos 35 yakha ifektri yayo.
1. Amagama afanayo: IPPP, Triaryl phosphates Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 35, Triaryl phosphates (25/25 ℃): 1.183Acid Value (mgKOH / g): 0.2 maxColor Index (APHA Pt-Co): 80 maxViscosity @ 25 ℃, cps: 35-50Phosporus Content: 8.6% 6.Izicelo: Ingabe kunconywa njenge ilangabi elibuyisa i-PVC, i-polyethylene, i-leatheroid, ifilimu, ikhebula, ucingo lukagesi, i-polyurethanes eguquguqukayo, izinhlaka ze-cullulosic, kanye nenjoloba yokwenziwa. Ibuye isetshenziswe njenge-flame retardant processing aid yama-resins enjiniyela, njenge-PPified mofO, i-polycarbonate ne-polycarbonate blends. Inokusebenza okuhle ekumelaneni nowoyela, ukuhlukaniswa ngogesi kanye nokumelana nefungus. 7.Iphakheji: inetha le-200kg / iron drum (16MTS / FCL), 1000KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK. Lo mkhiqizo uyimpahla eyingozi: UN3082, CLASS 9
Ukuhlinzeka ngokubonisana ngentengo ye-isopropylated triphenyl phosphate, iZhangjiagang Fortune Chemical Co, Ltd, phakathi kwalabo abakhiqizi nabahlinzeki abahle kakhulu be-isopropylated triphenyl phosphate eChina, kulindwe wena ukuthi uthenge isopropylated triphenyl phosphate yakha ifektri yayo.